Kolombia: Fanazarantenam-Pirenena Voalohany Hiatrehana Fahamehana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Oktobra 2011 4:30 GMT
Vakio amin'ny teny Français, English, বাংলা, srpski, Italiano, македонски, Español
Ireo izay miandraikitra ny hetsika, izay napetraky ny governemanta hanomboka amin'ny 11 ora maraina, dia nitodika tamin'ny media sy nanokatra vohikala [es] hanasana ny Kolombiana handray anjara amin'ny fanazarana. Araka izany dia nanaiky ny handray anjara amin'ity fanazarana, izay voalohany eo amin'ny sehatra nasionaly, saingy fahatelo kosa ho an'ny an-drenivohitra, Bogotá [es], ity ny sampan-draharaham-panjakana, sekoly maro samihafa ary orinasa tsy miankina maromaro.
Mivoaka [es] ao amin'ny vohikala ofisialy :
Ny fanazarana hiatrika voina no nametraka an'i Bogotá, sy ny firenena amin'ny ankapobeny, ho mpitari-dalana amin'ny fisorohana sy ny fiomanana hiatrika voina manerana an'i Amerika Latina. Tamin'ity taona ity, nentanina manokana ny rafi-mpampianarana, izay ahitana sekoly fanabeazana miisa 214 manerana ny tanàna, miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana, nanamafy ny fandraisany anjara.
Nanana ny anjarany ihany koa ny valantserasera ary niresaka momba ity hetsika ity amim-bazivazy ny olona.
Mahita hetsika politika ao anatin'izy ity ihany koa ny sasany. Carlos Hernánez (@creacionhumana) [es] niteny fa nisy fanarontsaronana tao mba tsy hiadian'ny olona hevitra amin'ny Fifanarahana ara-barotra Malalaka eo amin'ny Etazonia sy i Kolombia:
Narangaranga tsy hiresahantsika ny fidirana amin'ny Fifanarahana ara-barotra Malalaka ve ny fanazarana?
Nohararaotin'i Mal_nacida (@JelizMon) [es] ny fotoana hiresahany ny tsy fahampian'ny fiompanan'ny rafi-pitsaboana kolombiana amin'ny fiatrehana voina:
Maninona raha manao fanazarana tsara kokoa ary hifantoka kokoa amin'ny FAHAMEHANA any amin'ny hopitaly
Na izany aza, manazava ny toe-draharaha ny mpisera Twitter tahaka an'i Marisol Gutierrez (@marysolga) [es] ary manoratra:
Nikarajia aho, nihomehy; nandehandeha, nitady ny vondrona misy ahy, niteny hoe ity aho dia niverina niasa. Izay ilay fanazarana. Haha, mampiala voly tahaka izany ve ny fihovitrovitry ny tany?
Misy koa moa ny hevitra isan-karazany mampiseho ny zavamisy fa tsy tratra ny tanjona tamin'ilay hetsika.
Nanoratra i José David Hidalgo (@josedavidalejo) [es] :
Tena ratsy koa ilay #Fanazarana Tao amin'ny sekoly Ambony nisy ahy :/
Nasongadin'i Geovanna Valencia (@Geovannella) [es] fa rehefa tena misy voina tsy misy olona tony izany:
Fandaniam-potoana ilay #fanazarana, mandritra ny fotoana TSY MISY mieritreritra voina, tsy misy mahavita mitony izany!
Farany, misy ny sasany tahaka an'i Sebastián Álvarez (@SebasAlvarez6) [es], tsy nahamarika ny fisian'izany fanazarana izany:
Tsy nahamarika aho fa nisy #fanazarana!
Mbola maro ny domberina azo jerena rehefa mamaky ny tenifototra #simulacro.
Soratra miverina: Colombia, prima simulazione di evacuazione nazionale
[…] · Kolombia: Fanazarantenam-Pirenena Voalohany Hiatrehana Fahamehana […]
16 Oktobra 2011, 09:10